Otú nyefee Photos si iCloud ka Android
iCloud syncs gị iPhone si foto na iji ya "Photo Stream" atụmatụ, ma dị ka ihe ọ bụla ọzọ, ọ na-nwere ụfọdụ agaghị emeli. Otu ihe atụ, na i nwere ike na-adịghị ọbụna maara banyere bụ na o nwere mmachi nchekwa window nke 1000 photos ntụgharị nanị nke kasị ọhụrụ 1000 foto na-synced si gị iPhone gị iCloud ego irrespective nke eziokwu na i nwere ike karịa 1000 foto akpa na-kwadoo (were ihichapụ ụfọdụ, na-eche na ha ga-enwetatụbeghị kwadoo elu; oh ihe egwu!). Ọzọ mwepu bụ na ọ na-enye ndị ọrụ naanị 5 GBs nke free nchekwa nke nwere ike igbapu kama ngwa ngwa. Ya mere, otu onye nwere ike chọrọ ka ịgbanwee nyiwe na nwalee ihe gam akporo ngwaọrụ nke a nile data ga-gbanwere ọhụrụ Android ngwaọrụ.
Ị nwere ike nyefee gị iCloud foto gị Android iji nkịtị ma ogologo usoro nke na-agụnye nbudata gị iCloud foto gị iPhone, na-edegharị foto ndị a si gị iPhone gị PC site n'ọnụ a eriri USB, ejikọta gị lekwasịrị Android ngwaọrụ gị PC site na eriri USB na mgbe ahụ na-edegharị foto ndị a ọzọ site na PC gị gị Android ngwaọrụ. Dị ka ọ bụrụ ihe a nile ịkwụnye na Iṅomi bụ ezughị, ị pụrụ ọbụna mkpa na a di na nwunye nke software iji tọghata data ụdị na ihe adịghị. Ọ dịghị, ọ anaghị akwụsị ebe a, e nwere ihe a otutu ize ndụ aka na a nile usoro dị ka messing ya ga-anaghị achọ mgbalị ọ bụla ma ọlị. Ugbu a, m na-amaghị banyere gị ma ihe ala na-ahụ n'anya na onye ọ naghịkwa ọbụna dị ka ụda nke niile na ịrụsi ọrụ ike.
Tupu ị ịkpọ google search ahụ zuru okè iCloud data ebufe software, ka anyị ịzọpụta gị na-alụ na-ịme ka ị otu. Wondershare MobileTrans Bụ nnọọ uru ngwá ọrụ na-enye gị ohere nyefee gị foto site na iCloud gị Android ngwaọrụ site na ịpị nanị a button . Ọ nwere ike ibudata gị laptọọpụ / na kọmputa na bụ dakọtara na ma Windows na Mac OS. Ọ bụghị nanị na-ahapụ gị na gị niile foto gị iCloud akaụntụ kamakwa-enyere gị aka nyefee niile n'ime kọntaktị gị, music, oku na ndekọ, kọntaktị, ozi na vidiyo kwa!
Ka dị nnọọ ebipụ ka chụrụ ma malite iji a magburu onwe mpempe software. Nke a dị mfe ga-eduzi-ewe gị site na usoro nke nzọụkwụ na-akụziri unu nyefee foto site na iCloud ka Android:
1. Download Wondershare MobileTrans site na njikọ nyere n'okpuru. Wụnye software na kọmputa gị / laptọọpụ, na-agba ya na nbanye gị iCloud akaụntụ na iji Abanye ngalaba na Ihuenyo nke MobileTrans.
2. ikwunye na gị Android ngwaọrụ site na a eriri USB gị na laptọọpụ / kọmputa. Họrọ iCloud ndabere nhọrọ. A mmapụta elu menu ga-apụta na a ọrụ mmanya na-egosi na ọganihu nke download; na-eche maka download mezue.
3. Mgbe ndabere faịlụ okokụre nbudata, si menu kpọrọ "Họrọ Content iji weghachi", kaa checkbox kwekọrọ na "Photos" na iti "Malite Copy". Photos na ị dị nnọọ kwadoo si iCloud ga-akpaghị aka depụtaghachiri gị android ngwaọrụ.
Mgbe esonụ ndị a dị mfe atọ i nwere ike ugbu a nwere niile nke gị photos na gị android ngwaọrụ enweghị ihe ọ bụla iwe. Ọzọkwa, obi ike na ọ na-adịghị na-adị mfe karịa nke a; -eche banyere ya, unu niile ga-eme bụ ikwunye na ngwaọrụ gị na pịa ole na ole buttons! Ya mere, ọ bụrụ na ị na-enweghị uche, ewere ọsọ ọsọ gbalaga ma ọ bụ nanị larịị umengwụ, MobileTrans bụ nke zuru okè nhọrọ maka gị.
Ọ ga-uru banyere ebe a na MobileTrans bụghị nanị na-ahapụ gị nyefee gị foto ndị si iCloud ka Android ngwaọrụ ma ọ nwekwara ike-eji nyefee ọzọ ngwa (tinyere na ụyọkọ ihe ndị ọzọ!) Si gị iPhone gị Android ekwentị nnọọ mfe site na-ahọpụta nhọrọ akara dị ka "égwu" si "Họrọ Content iji weghachi" menu. Ị na-nwere ike chọpụtara na MobileTrans eme ọtụtụ n'ime ọrụ gị n'ihi na ị na-achọ ka ị na-nanị pịa bọtịnụ ma ọ bụ abụọ nke dị ego nke mgbalị ọtụtụ n'ime anyị chọrọ na-etinye na ugbu a, a ụbọchị!
1. Na-ndabere gị iCloud music ma hụ na ị na-adịghị ihichapụ ya. Ọ pụrụ kemfe ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-aga na-ezighị ezi.
2. Mgbe obi a software na ị ibudatara a ọzọ website dị ka ọ pụrụ imebi ngwaọrụ gị.
3. Jide n'aka na ị juputara ịgụ na ịghọta niile nzọụkwụ tupu iso n'ihu iji zere-ebibi gị ngwaọrụ ma ọ bụ na-n'ime ihe ọ bụla na-achọghị nsogbu.
> Resource> iCloud> otú nyefee foto site na iCloud ka Android